တရုတ်နိုင်ငံတွင်လူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုး -- fscyal.com
၎င်းသည်ယဉ်ကျေးသောမြို့များ၏ဆောက်လုပ်ရေးတွင်လှပသောရှုခင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်. အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၏ဆောက်လုပ်ရေး၌တည်၏, အသစ်သောတိုင်းတာမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်, အသစ်သောအယူအဆနှင့်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပုံရိပ်ကို.
Changyuan အလူမီနီယံအလွိုင်း guardrail / ခြံစည်းရိုး၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ် 6063 စက်မှုအလူမီနီယမ်. ၎င်းကို extrusion ဖြင့်ပြုလုပ်သည်, အိုမင်းခြင်း, ဂဟေ, နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန် electrostatic ပက်ဖြန်း. အလူမီနီယမ်အလွိုင်း guardrail ဂဟေဆော်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး, ဝါယာကြိုးဆက်သွယ်မှုနှင့်ထောင့်ဆက်သွယ်မှု. ၎င်း၏ node များတင်းကျပ်စွာနှင့်ချောမွေ့စွာဖြစ်ကြသည်, စိတ်ချရသော, လှပပြီးဖက်ရှင်, သံချေးမပါဘူး, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အသက်ရှည်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့. အရောင်လူမီနီယံ guardrail တရုတ်အတွက် guardrail စက်မှုလုပ်ငန်းများအဓိကတော်လှန်ရေး၏ crystallization ဖြစ်ပါတယ်, သောကာလ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တွေ့ဆုံရန်သာ, ဒါပေမယ့်လည်းအနိမ့်ကာဗွန်သုံးစွဲမှု၏မဟာဗျူဟာလမ်းညွှန်တုံ့ပြန်သည်, စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. လူတွေရဲ့ဘဝမှာ, ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာနှင့်အလှဆင်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်. ၎င်းသည်ယဉ်ကျေးသောမြို့များ၏ဆောက်လုပ်ရေးတွင်လှပသောရှုခင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်. အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၏ဆောက်လုပ်ရေး၌တည်၏, အသစ်သောတိုင်းတာမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်, အသစ်သောအယူအဆနှင့်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပုံရိပ်ကို.
ပန်းဒီဇိုင်းအတွက်အကြံပြု tubing collocation
လက်ကိုင်(မီလီမီတာ) 80*40*1.5 ပုံပျက်သော Tube
80*40*1.5ဘဲဥပုံ Tube 60*40*1.5
ဘဲဥပုံ Tube 60*40*1.5
ပတ်လည်အတိုင်းအတာခြံစည်းရိုးများအတွက်အကြံပြု tubing collocation
ပို့စ်တင်(မီလီမီတာ) 50*50*1.2 Square Tube 40*40*1.2 Square Tube
ရထားလမ်း(မီလီမီတာ) 40*40*1.2 Square Tube 40*40*1.0 Square Tube
လက်မှတ်(မီလီမီတာ) 19*19*1.0 Square Tube 16*16*1.0 Square Tube
12*15*0.8 ဘဲဥပုံ Tube
ဖော်ပြချက် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလူမီနီယံ extrusion ပရိုဖိုင်းကို
မျက်နှာပြင်ကုသမှု ကြိတ်စက်ပြီးပြီ; ခွေးရူး; အမှုန့် coated; သစ်သားစပါးကို; Electrophoresis; အပူလွှဲပြောင်းပုံနှိပ်ခြင်း
စျေးနှုန်း တောင်တရုတ်သတ္တုလဲလှယ်ရေး / LME အဓိကလူမီနီယံစျေးနှုန်း + အများဆုံးအပြိုင်အဆိုင်ပြောင်းလဲခြင်းကုန်ကျစရိတ်
မှိုမူဝါဒ ဝယ်ယူလိုက်သောပစ္စည်းတစ်ခုစီသည် volume ကိုရယူပါ3တန်ချိန်, မှိုငွေပေးချေမှုပြန်အမ်း
ပို့ဆောင်ချိန် နှင့်အတူနမူနာ 15 ရက်ပေါင်း; နှင့်အတူလျောက်ပတ်သောအမိန့် 15-30 ရက်ပေါင်း
ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း 30% အပ်ငွေ, shippment ဆန့်ကျင်ချိန်ခွင်လျှာပေးဆောင် (EXW); ဒါမှမဟုတ် 30% အပ်ငွေ, အတွင်း B / L ကိုမိတ္တူဆန့်ကျင်ချိန်ခွင်လျှာလစာ7ရက်ပေါင်း
1.လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း, မူပိုင်ခွင့် Snap-In connection ကိုသုံးနိုင်သည်, အလွန်တပ်ဆင်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်အောင်.
2.များစွာသောမျိုးကွဲနှင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိပါတယ်, ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်, ဥရောပနဲ့အမေရိကန်စတိုင်တွေနဲ့ဒီနေ့လူကြိုက်များတဲ့ဖက်ရှင်တွေပါ, မြင့်မြတ်သောနှင့်ခေတ်သစ်အလှတရားဖေါ်ပြခြင်း.
3.ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လူတွေကိုအန္တရာယ်ကင်း (တိရိစ္ဆာန်များ), ခြံစည်းရိုးမတော်တဆထိမိလျှင်ပင်, သံမဏိနှင့်ခြံစည်းရိုးကဲ့သို့လူများကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ.
5. အထူးမှုတ်လိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်တိုးသုံးနိုင်သည်, ခရမ်းလွန်, မနွမ်းပါဘူး, အဝါရောင်မရှိပါ, အဘယ်သူမျှမခွံ, ကွဲအက်ခြင်းမရှိ, အမြှုပ်မပေးပါ, ပိုးမရှိ, အလူမီနီယမ်အလွိုင်းခြံစည်းရိုး၏သက်တမ်းသည် ပို၍ ရောက်ရှိနိုင်သည် 60 နှစ်ပေါင်း.
6.ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလင်းပစ္စည်း: ကုန်ပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုဂဟေဆော်စရာမလိုဘဲစုစည်းထားသည်. ၎င်းကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းပရိုဖိုင်းများကို အသုံးပြု၍ စုစည်းထားသည်, လူမီနီယံအလွိုင်း guardrail ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် screw နှစ်ခု. ဒီဆက်သွယ်မှုကအားနည်းနေတယ်, ဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့်ပြုတ်ကျခြင်းမရှိ, နှင့်လုံခြုံရေးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်. လူမီနီယမ်လသာဆောင်လက်သည်းများသည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်, လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်, နှင့်ပေါ့ပါးသည်.
7.လူမီနီယမ်အလွိုင်းလသာဆောင်ဂါးတန်းမြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, နှင့်ကောင်းသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်. အခြားအစဉ်အလာပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်, အလူမီနီယမ်အလွိုင်းလသာဆောင်ထိန်းညှိများသည်ပိုမိုကြီးမားသောသက်ရောက်မှုနှင့်ဆန့်အားများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်မာကျောမှုရှိသည်, ပိုကောင်းတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်. လိင်. အလူမီနီယမ်အလွိုင်းလသာဆောင်ပြောင်လက်မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်ကိုဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်, အလူမီနီယမ်အလွိုင်းထုတ်ကုန်များအလွန်မြင့်မားသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိစေနိုင်သည်.
8.အလူမီနီယမ်အလွိုင်းလသာဆောင် guardrail ၏အရောင်ကွဲပြားခြားနားသည်, နှင့်ထုတ်ကုန်များ၏အကွာဂရုတစိုက်တိုင်းတာနှင့်အတည်ပြုသည်. ၎င်းသည်လုံခြုံမှုကာကွယ်ရေးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္aမှပါ ၀ င်သည်, ဒါပေမယ့်လည်း၏အသွင်အပြင်နှင့်အရပ်ရှည်ရှည်၏အရသာ၏အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်. ဖောက်ထွင်းသူများ၏နေအိမ်ဘဝ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီထုပ်ပိုးမှုကိုလိုက်ဖက်။ တပ်ဆင်နိုင်သည်.
9.လူမီနီယမ်အလွိုင်းလသာဆောင်ဂါးတန်းသည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်, ကျန်းမာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေထုတ်ကုန်. လက်ရှိကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အောက်မှာ, အလူမီနီယံအလွိုင်း guardrail ထုတ်လုပ်သူအမျိုးသားရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီမြင့်မားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူထုတ်ကုန်မွေးစားပါပြီ, အိမ်သူအိမ်သားများအတွက်လုံခြုံပြီးကျန်းမာဖန်တီးခြင်း.
ဟုတ်တယ်! ကျွန်ုပ်တို့သည် RAL အရောင်နမူနာကိုအသုံးပြုသည်, သင်ဘယ်လိုအရောင်မျိုးကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုသာအသိပေးပါ
Q2: အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ခြံစည်းရိုးတစ်ခုလုံးအစားပစ္စည်းများသာလိုအပ်လျှင်, မင်းငါ့အတွက်လုပ်ပေးလို့ရတယ်?
အမှတ်အသားများ (Tags)：လူမီနီယမ် extrusion ပရိုဖိုင်း, လူမီနီယံခြံစည်းရိုး, ဂဟေဆော်ခြင်းမရှိဘဲလူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုး, လူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုးထုတ်လုပ်သူ, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို, ဂဟေဆော်ခြင်းမရှိဘဲလူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုးကိုဝယ်ကြလော့